Pop Pin New June 30, 2019
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းတရားဥပဒေစိုးမိုးစေရန် အကြီးအကဲများကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အူဝဲ… အူဝဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးပရိတ်သတ်အများဆုံးမင်းသမီးတလတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ အပြင်သူမဟာသမီးလေးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှမိခင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ မှာတော့သူမကသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်ပါတယ် အူဝဲရေးသားချက်ကတော့”သမီးတယောက်ရဲ့ အမေအဖြစ်ရှိနေတဲ့ အူဝဲအတွက်တော့ အရမ်းခံစားရတယ်အမှုမှန် အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေမြန်မာပြည်မှာ တရားဥပဒေပိုမိုစိုးမိုးလာရန်ပြည်သူတွေတရားဥပဒေကိုပိုမိုယုံကြည်​ လေးစားလိုက်နာလာရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကနေပြည်တော်က ကလေးမုဒိမ်းမှု၏တရားခံအစစ် ကိုမပျက်မကွက်ဖော်ထုတ်ပေးပါရန်ပြည်သူများကလေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။#JusticeForVictoriaဆိုပီးရေးသားထားပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးလဲတူတူပူပေါင်းကူညီမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် အမှုမှန်ပေါ်ပါစေ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအေးချမ်းပါစေ။ဖတ်ရှူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်… crd ………………………… unicode မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မိခငျတှထေဲကတယောကျမို့ သကျငယျမုဒိမျးတရားဥပဒစေိုးမိုးစရေနျ …
အမြန်လမ်းတွင် နွားလှည်းနဲ့ Express တိုက် နွားလှည်းမှ မောင်နှမ နှစ်ဦးလုံး အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံး … ဇွန်လ(၃၀)ရက်​​နေ့ နံနက်(၀၅၃၀)နာရီအချိန်​ နေပြည်​​တော်​-မန္တလေး လမ်း မိုင်တိုင် ၂၇၂/၇ အနီး တွင် ယာဉ်​​မောင်းဦးမြင့်​​ကျော်​၊ (၅၀)နှစ်​၊ မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်​အမှတ်​ MDY 5M/ ကောင်းမြတ်​မန်း express ခရီးသည်​တင်​ယာဉ်​သည်​ ယာဉ်​​မောင်းပါ ကျား(၃၆)ဦး၊ …
လူငယ်ကြိုက်တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲရင့်အောင်ကတော့ ဂီတလောကမှာတော့ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ဆွတ်ခူးရရှိထားသူတစ်ဦးပါ… ရဲရင့်အောင်က လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်… ရဲရင့်အောင်ရဲ့ သီချင်းတွေကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ တော်တော်လေး အောင်မြင်ပြီး ပေါက်တာကို တွေ့ရပါတယ်… ဒီကနေ့ ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့မှာတော့ ရဲရင့်အောင်က သူ့ရဲ့ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်နဲ့ …
ပိုက်ဆံရှိရင် အာဏာက အလိုလိုရှိလာသတဲ့လား ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းနဲ့ အမှန်တရားတွေကို ပါးစပ်ပေါက်ပိတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီလား 💔 ပိုက်ဆံသည်သာ ဒုတိယဘုရားသခင်ဆိုသည်မှာ ဧကန်ပင်လား 💔 အ​ဖေကဒုရဲအုပ်​ အ​မေက​ကျောင်းအုပ်​လုပ်​တဲ့လူကကိုကိုလို့​က​လေးကိုယ်​တိုင်​​ပြောတယ်​…. အမှု့ကြာတာရယ်​ ​တော်​​တော်​နဲ့မ​​ပေါ်တာရယ်​ကဘာ​ကြောင့်​လဲ…. ခန့်​မှန်းမိမယ်​ထင်ပါ​တယ်​….ဝမ်းကွဲညီမကိုလဲကျူးလွန်​ဖူးတယ်​လို့စကား​တွေရှိဖူးတယ်​တဲ့…. မိဘ​တွေရဲ့ cover ​ကောင်းလို့​အေး​ဆေးပီးသွားတယ်​လို့​ကြားတာပဲ….. အမှု့အ​ကြောင်းအစအဆုံးသိချင်​ရင်​👇🏻👇🏻 🚨ကိုကိုလုပ်​တာ။ကိုကိုက အခန်းကျယ်​ကို ​ခေါ်သွားတယ်​… 🚨ဆရာမ နှင်းနု သိတယ်​…။ဆရာမနှင်းနု က ကိုကို ကိုဆူတယ်​…။ကိုကိုကို …
ကိုယ်တိုင်မမြင်ဖူးပေမယ့် အားလုံးက အသိမှတ်ပြုထားတဲ့တရားခံအစစ် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ပါအဖေက ရဲအုပ် အမေကတော့ အမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျောင်းအုပ်ပါ။ အကြီးကောင်က 10တန်းကျ…အငယ်ကောင်က 8တန်းတက်ရဲမှုးကြီးပြောသလို နှစ်ဖက်လုံးမနစ်နာစေချင်ပါဘူးဆိုတာက တရားခံညီအစ်ကိုက ကျောင်းသားဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ ကျောင်းသားဖြစ်လို့ မနစ်နာစေချင်ဘူးဆိုရင်မူကြိုကျောင်းသူလေးရဲ့ အရွယ်မသေးတဲ့ကလေးမလေးရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကရောအမှန်တရားဆိုတာ အမှန်တရားပါပဲ….တရားခံက တရားခံပါပဲဗျာ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီကလေးဆိုတဲ့ တရားခံနှစ်ယောက်က တက်ညီလက်ညီ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ကလေးမလေးကို မုဒိန်းကျင့်ကြတာပါမသိမမြင်အောင် ကြိတ်ကြံတာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကထဲက ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့ …
နေပြည်တော် Wisdom Hill ပိုင်ရှင်ဦးပညာ၏ အမဖြစ်သူမှ ပြောလိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက် နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မူကြိုကျောင်းတစ်ခုက သက်ငယ်မုဒိမ်းအမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူတွေကြားထဲမှာ နာမည်ကြီးနေခဲ့ပြီး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့သူတွေဘက်ကတုန့်ပြန်ပြောကြားမှုမရှိခဲ့ပေမယ့် မူကြိုကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူကတော့ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလိုပြောပြခဲ့တာပါ။ နေပြည်တော် သက်ငယ်မုဒိန်းအမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ Signature Fashion – designed …
ချစ်သူ ရက်ရက်စက်စက်ထားသွားခြင်းခံရတဲ့ ခံစားချက်ကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ နီလန်းရဲ့ ပျော်ပါတော့ သီချင်းလေး(ရုပ်သံ)
Myanmar Idol ရဲ့ Top 10 ထဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နီလန်းလေးကို ပရိသတ်တွေ သိမယ်ထင်ပါတယ်နော် ။ သူမဟာ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကို အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကောင်း တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော် ။ သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကြောင့် သူမရှေ့ဆက်ဖို့ ခွန်အား တွေရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် …
သမီး​လေး Victoria အတွက် သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုထုတ်ပြောလာတဲ့ “မယ်လိုဒီ”
လတ်​တ​လော လူမှုကွန်​ယက်​မှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ ၂ နှစ်​အရွယ်​ သမီး​လေး မုဒိန်းကျင့်​ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး မြန်​မာ ပြည်​သူ၊ ပြည်​သား​တွေ​အကုန်​လုံး စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​​နေကြတာပါ။ ပြည်​သူတစ်​ဦးတဖြစ်​လဲ သရုပ်​​ဆောင်​ မယ်​လိုဒီကလည်း သမီး​လေး Victoria အတွက်​ သူမရဲ့ခံစားချက်​ကို ထုတ်​​ပြောလာတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ မယ်​လိုဒီက​တော့ ကိုယ့်​မိသားစုသာဆိုရင်​ ဆိုပြီး ကိုယ်​ချင်းစာတရားအပြည့်​ရှိကြဖို့ကိုလည်း ​ပြောထားပါ​သေးတယ်​ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ မိခင်​တိုင်းရှိသင့်​တဲ့ စိတ်​ထား​လေးကို …
သမီးလေး Victoria အတွက်အမှန်တရားအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေ shareခြင်းဖြင့်စည်းလုံးညီညွှတ်စွာအင်အားပြကြစို့ ပိုက်ဆံရှိရင် အာဏာက အလိုလိုရှိလာသတဲ့လား ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းနဲ့ အမှန်တရားတွေကို ပါးစပ်ပေါက်ပိတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီလား 💔 အမှု့အ​ကြောင်းအစအဆုံးသိချင်​ရင်​ အောက်တွင် လင့် များ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် 🚨ကိုကိုလုပ်​တာ။ကိုကိုက အခန်းကျယ်​ကို ​ခေါ်သွားတယ်​ 🚨ဆရာမ နှင်းနု သိတယ်​…။ဆရာမနှင်းနု က ကိုကို ကိုဆူတယ်​…။ကိုကိုကို ​နောက်​မလုပ်​ရဘူးလို့​ပြောတယ်​ 🚨ဆရာမနှင်းနု ရေ​ဆေး​ပေးတယ်​ အထက်​ပါအ​ကြောင်းအရာက …
Victoria လေးရဲ့အမှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဆရာမလေး “နှင်းနုလွင်” ကို မေတ္တာရပ်ခံလာတဲ့မေဦး
လတ်တလောမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်များလာတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဆိုးရွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အာ့ထဲမှာမှ နေပြည်တော်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Victoria လေးရဲ့အမှုက ဒီရက်​ပိုင်း ပိုပြီး ကျယ်​ကျယ်​လောင်​​လောင်​ ရှိလာပါတယ်​။​လူ​တွေလည်း ပို သတိထားမိလာကြပြီး အာရုံစိုက်​လာကြတဲ့အပြင် အနုပညာရှင်များပါ တတ်နိုင်သမျှ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ တစ်တပ်တအားပါဝင် လာကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအနုပညာရှင်တွေထဲမှာ …